HGH ထိုင်း - ရောင်းမည်ထိုင်းနိုင်ငံတွင် Genotropin GoQuick 12mg 36 IU သည် - HGH ဘန်ကောက်
ပင်မစာမျက်နှာ အရစ်ကျပေးချေခြင်း (တူညီသောအရစ်ကျငွေပေးချေခြင်း + ငွေသွင်းခြင်း) Genotropin GoQuick 12mg 36 IU (လက်မှတ် + ဆေးညွန်းဆေးအခမဲ့!)
အရစ်ကျပေးချေခြင်း (တူညီသောအရစ်ကျငွေပေးချေခြင်း + ငွေသွင်းခြင်း) Genotropin GoQuick 12mg 36 IU (လက်မှတ် + ဆေးညွန်းဆေးအခမဲ့!)
ယခုမှာလိုက်ပါ! 2-3 ရက် DHL သို့မဟုတ် 2-3 နာရီတိုင်အခမဲ့ရယူပါ။
ဘဝအစီအစဉ် "A" - ၅ လတွင်တစ်လလျှင် ၂ ကြိမ် (စုစုပေါင်း ၁၀ ပင်) - ၂၆၀၀၀ ฿ ဘဝအစီအစဉ်“ B” - ၅ လတွင်တစ်လလျှင် ၃ ကြိမ် (စုစုပေါင်း ၁၅ ခြံ) - ၃၇၀၀၀ ฿ ဘဝအစီအစဉ် "C" - တစ်လလျှင် ၃ ကြိမ်၊ ၁၀ လအတွင်း (စုစုပေါင်းခြံ ၃၀) - ၃၀၀၀၀ ฿ ဘဝအစီအစဉ် "D" - ၁၀ လအတွင်းတစ်လလျှင် ၂ ကြိမ် (စုစုပေါင်းခြံ ၂၀) - ၂၃၀၀၀ ฿ သင်၏အထူးအခြေအနေများ၊ မန်နေဂျာနှင့်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှု -0฿
ဘဝအစီအစဉ်“ A” - ၅ လတွင်တစ်လလျှင် ၂ ကြိမ် (စုစုပေါင်း ၁၀ ခြံ) ဘဝအစီအစဉ် "B" - ၅ လတွင်တစ်လလျှင် ၃ ကြိမ် (စုစုပေါင်း ၁၅ ခြံ) Life Plan "C" - ၁၀ လ၊ တစ်လလျှင် ၃ ကြိမ် (စုစုပေါင်း pin ၃၀) ဘဝအစီအစဉ် "D" - ၁၀ လအတွင်းတစ်လလျှင် ၂ ကြိမ် (စုစုပေါင်း pin ၂၀) သင့်ရဲ့အထူးအခြေအနေများ, မန်နေဂျာတိုင်ပင် ပြည့်စုံစုံကိုရွေးချယ်ပါ။
- လုံးဝစစ်မှန်သည် နှင့်အသိအမှတ်ပြုထုတ်ကုန် ဆေးဝါးကုမ္ပဏီ Pfizer ဘယ်လ်ဂျီယံမှ
- အခမဲ့ပြန်လာအာမခံချက်, ဖောက်သည်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး
- မူရင်း ဆေးညွှန်း ဆေးခန်းမှသင်၏နာမ၌
- ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ၂-၃ နာရီကြာစာပို့ပို့ဆောင်ပေးသည် ငွေသားပေးချေမှု ဒါမှမဟုတ် PayPal က ခရက်ဒစ်ကဒ်
- ၂-၃ ရက်ကြာအခမဲ့နိုင်ငံတကာသင်္ဘောများ
- ဆေးထိုးအပ်များ၊ အရက်သုတ်ဆေးများ (သင်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သမျှ)
- ၂၄/၇ ဖော်ရွေသောဖောက်သည်များနှင့်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း
အဆင့်ဆင့် activation ညွှန်ကြားချက်များ
active ပစ္စည်းဥစ္စာ: Recombinant လူ့ကြီးထွားဟော်မုန်း (Somatropin, HGHအရေပြားအောက်ဆုံးဆေးထိုးဘို့), မြုံ HGH ဖြေရှင်းချက်
(ငယ်ရွယ်သောကလေးများအတွက်) ကိုယ်ခန္ဓာ၌ HGH ချို့တဲ့, ကြီးထွားမှုအရှိန်မြှင့်;
ကာယဗလ - ဟိုအကျိုးသက်ရောက်မှု, 200% -300% ပိုမြန်, ဒဏ်ရာအနာပျောက်စေနိုင်သောကြွက်သားကြီးထွားမှု, တစ်ရှူး, ရွတ်နှင့်အဆစ် accelerates;
, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ lebido တိုးပွါးတစ်ဖွဲ့လုံးကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ယေဘုယျအခြေအနေပေါ်တွင်တစ်ဦးအပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
38 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ. ထင္ျမင္ခ်က္ေရးထားခဲ့ပါ။